Archive du 22-oct-2020
Manala tasy aminny ovy, citron
Maro karazana ny antony mahatonga ny tasy maramara sy ny panda eo aminny tarehy. Isanizany ny masoandro, ny loto miandrona,
Ho anireo te hanala tavy na miady aminny spasmophilie. Sakafo tsara hanina isanandro ny sésame.
Humanity Generosity Hug Ankizy 430 no hahazo fanampiana ara-pitaovana
Toy ny isan-taona dia hanohana ara-pitaovana ireo ankizy manana Ray aman-dreny sahirana na ankizy kamboty ny Humanity Generosity Hug na ny Fikambana Sakambino Madagasikara, fikambanana nantsangani Bodo (mpihira).
Vomanga aminny ronakoho Akora ilaina
Fihenan-danja mahagaga an-dry Amel Bent, Kendji Girac
Mahagaga ny nahavery lanja ireto olo-malaza ireto. Fa nataonizy ireo laharam-pahamehana ny fikoloana ny vatany sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary tena nanampy azy ireo betsaka izany
Misakafo aminny hôtely, mety hampihena koa!
Rehefa miasa dia tsy voatery ho tafody antoandro hany ka tsy maintsy misakafo any aminireo toeram-pisakafoana.
Lokom-bolo, extension: mampiongo-bolo raha
Toe-javatra mety hiseho aminny vehivavy, aminny ankapobeny, ny fihintsananny volo. Inona no mety mahatonga azy io?
Shopping « Fait main »
1. Panier pique nique en osier - Page Facebook « Soa Handmade »- 45000ar sans doublure/ 50000ar avec doublure 2. Bac à rangement en raphia gris - Diamètre: 30cm - Hauteur: 35 - Prix : 35000Ar - Page Facebook « Soa Handmade »
Milk-shake mampatanjaka, ho anireo miari-tory
Raha hiari-tory dia tsara raha omanina mialoha ny vatana. Mba hatanjaka tsara dia mety ny misotro ity milk-shake ity. Somary miavaka kely izy ity, satria natao hampatanjaka ny olona ratsy torimaso mihitsy.
LAKAN-DRANONANDRIANTANY Fatin-dehilahy efa simba, natsingevanny rano
Fatin-dehilahy iray efa simba no hita teny aminny lakan-dranonAndriantany mandalo ao aminny fokontany III G Hangar omaly maraina. Raha araka ny tombanireo nanatri-maso dia mety efa ho herinandro no nilon-drano tao ity razana ity saingy omaly vao hita.
FOKONTANY ANKORONDRANO ANDRANOMAHERY Tonga ny tomponireo tany izay nohajarianny mponina an-taonany maro
Nikorontana ireo fokonolona teny aminny Fokontany Ankorondrano Andranomahery omaly maraina.
TSENANNY ZAIMAIKA Hotantananny fikambanana tsy miankina
Omena hotantananny fikambanana tsy miankina manomboka izao ny tsenanny Zaimaika etsy Analakely, fantatry ny maro aminny fivarotana hani-masaka.
Ady aminny bibikely mpanimba voly katsaka « olitra lezionera » Velaran-tany mirefy 50Ha no nisitraka « piège à pheromones » miisa 250
Velaran-tany mirefy 50Ha izay anny mpamboly katsaka miisa 150 mivondrona anaty koperativa 3 ao Niarovana Caroline,
Covid-19 Tsy miankina aminny toetry ny andro loatra
Tsy miankina aminny toetry ny andro loatra ny fihanaky ny covid-19 raha ny zava-misy eran-tany, hoy ny nambaranny solombavam-bahoaka Rivo Jocelyn Andriamanalina.
Ankatso II Niharanny fitsaram-bahoaka ilay mpangalatra
Faritra anisanny tena hanjakanny tsy fandriam-pahalemana ny eny amininy faritra Ankatso iny.
Big Mj Nizara sakafo ho anireo olona nifanena taminy
Miavaka hatrany ny fomba nentinilay mpanakanto Big Mj nanamarihana ny tsigerin-taona nahaterahany ny talata 20 Okotobra teo.
Maro ny dingana tsy maintsy arahina mba hahafahanny tanora miditra ao anatinny fananganana orinasa hoy ny fanazavanny CEERE na ny Club Entrepreneures Etudiants du Rendez-vous des Entrepreneurs.
Federasiona Baolina kitra Malagasy Nahazo sary famantarana vaovao
Omaly no nampahafantatra ampahibemaso ny sary famantarana na ny logo vaovaony ny Federasionny Baolina Kitra Malagasy.
Jobily volamenanny FJKM synodam-paritany Antananarivo Andrefana Miantso malala-tanana ny filoha
Miantso ny malala-tanana rehetra ny filohanny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, ao aminny fiangonana FJKM, mba samy hitondra ny anjara birikiny aminny fanorenana tsangam-bato, aminny faha -25 taona nijoroany.